China Uphuhliso oomatshini ukutya - China Qingdao Machinery uqinise
I-China Ukutya Machinery Network iye kucetyiswa ngenyameko iingongoma ezingundoqo kushishino noomatshini ukutya namhlanje ukuququzelela wangaphakathi shishini ukuqonda uphuhliso loshishino kunye iindawo zasekuhlaleni, yaye ukuze uhlole amanye amathuba oshishino.
Food Machinery Agasti 10 Industry obala Hot
A yosiwe idada 18 yuan yimveliso duck inyama eveliswe ukuhlangabezana ipateni ukusetyenziswa ubunzima-emarikeni. Ngaphezu koko, inkoliso yezi mveliso duck nenyama cherry amadada ntlambo yaye amadada ezincinane ezimhlophe. Umjikelo lweehagu jikelele mfutshane, iindleko na controllable, kwaye inzuzo inzuzo. Lokuzalanisa, yokuxhela kaJohn ababangela imishini kunye nokuhambisa, kunye Nendawo ongenekuzo zemveliso zikhuselekile yaye ithembekile. Umgangatho liqinisekisiwe.
KaSirayeli isuke yaba ilizwe ubisi-ukuvelisa inani elinye zehlabathi ezibalaseleyo ngaphantsi kwe kwiindawo umhlaba eBeijing elo lizwe ezimbini. Uphi na ke imfihlelo ubisi-high isivuno? Emva kulo nyaka International Agricultural Technology Expo kwaSirayeli, a siqalo usebenzisa woluvo + software data ukuba ukuhlalutya iimvakalelo imazi. Index, ubugcisa ezintsha zokuncedisa iimazi zobisi ukuvelisa ubisi, iinkampani zobisi China bakaThixo ngcembe kuhlalutywa impendulo.
Akukho mathandabuzo ukuba "umatshini endaweni" unako ukuphucula nje kuphela ukusebenza yemveliso, ukunciphisa abasebenzi, ukusombulula ingxaki yokugaya enzima, kodwa ukuqinisekisa ukhuseleko lwemveliso, ukukhuthaza uphuhliso ophezulu ezikumgangatho lwamashishini, nokukhawulezisa isantya inguqu kunye nokuphuculwa woveliso . Liyinyaniso elokuba enoba eminye imisebenzi Ungasebenzisa robots, ukuba indawo kuphela kwizithuba kunokuba abantu. Imisebenzi hlengisa, ukupakishwa, palletizing, kunye nokusingatha ziye zafumana "umatshini endaweni", kodwa kusafuneka iingcibi abanezakhono yokuzilawula. Kwaye edebugging robots, kungenjalo ukusebenza yomsebenzi robhothi iya kuncitshiswa kakhulu.
Amanzi obuphezulu ngokuqhelekileyo isebenzisa umgangatho wamanzi umthombo wamanzi njengoko izinto ekrwada. Ngoko ke, inkqubo yonyango lwamanzi Akukho nzima, kwaye kuphela ukungcola luhluzwa kwaye inzalo. Okwangoku, amanzi unyango izimbiwa kwimarike idla usebenzisa filter zwi isanti, i-carbon filter iyasebenza, icebo lokucoca ngqo, isixhobo ultrafiltration, njalo njalo, kwaye ngoko ke inzalo ngu an sterilizer ozone. Ukuthatha i isixhobo ultrafiltration umzekelo, isixhobo onjalo isebenzisa isenzo uxinzelelo kudlula ngokukhawuleza isisombululo zolwelo ngokusebenzisa inwebu ukuhluza, apho ubumdaka aseleyo kuba ubukhulu Pore inkulu kakhulu ukuba sidlule.
Ngokutsho abasebenzi abachaphazelekayo, lo analyzer kwinkangeleko ukubona lukhuni, brittleness, luthambe, chewiness, komsipha / ngokwaphula amandla zokutya ezahlukeneyo, njl Kakade ke, nazo livavanywe kunye analyzer texture ezi parameters ukutya qabane. Umbhali uyaqonda ukuba ngenxa Iintlobo ngeentlobo zokutya yezilwanyana kwi emarikeni, ezifana pet ukutya owomileyo, ukutya okunkonkxiweyo, zonka, izicoci izinyo, njl, analyzers ezininzi texture ngeendlela ezahlukahlukeneyo ixhokonxa oza kukhetha kuyo, kwaye imo ubhaqo ke abongi , nje ukuba ukuhlangabezana izilwanyana ezahlukileyo. neemfuno zovavanyo ukutya.
unyango resource China ngayo biogas lidla iindlela ezimbini yokuvelisa isichumiso kunye biogas. Ukuze ukuba ukusetyenziswa kwezibonelelo lwenkunkuma ekhitshini, kuyimfuneko ukuba recycle umgqomo afanelekileyo kuqala. Yangzhou izama akhulule imiphanda ezincinane iintsapho ukuba baqikelele ukuba bavuselele inkunkuma ekhitshini. Ezi yinkangala zasekhitshini zisebenziseke iza ngokusebenzisa inkqubo "pretreatment + solution emanzi + medium ubushushu anaerobic ukubila".